चन्द्रयान अभियानले भारतमा लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने | NewsKarobar
गृहपृष्ठ चन्द्रयान अभियानले भारतमा लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने
चन्द्रयान अभियानले भारतमा लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने
भारतको चन्द्रयान-२ मिसन पूर्ण सफल नभए पनि यसले भारतमा लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने प्रक्षेपण वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् । किनभने भारतले अन्तरिक्ष मिसनलाई निरन्तरता दिने बताइसकेको छ । यस मिसनमा भारतका ख्यातिप्राप्त उद्योगहरू पनि यसमा संलग्न भई यसको विकासमा लागिपरेका देखिन्छन् ।
चन्द्रमाको सतह छुन २.१ किमि बाँकी हुँदा चन्द्रयान-२ मा जडित ल्यान्डर विक्रमको इसरोसँग सम्पर्क विच्देद भयो । यत्तिले मात्र पनि यस मिसनको ९९.५ प्रतिशत सफलता भएको वैज्ञानिकहरूले बताउन थालेका छन् । भारतीय अनलाइन दैनिक भास्करका अनुसार इसरोले ल्यान्डरसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने प्रयास जारी नै राखेको छ ।
चन्द्रयान-२ को अर्बिटर निर्धारित कक्षमा रहेर चन्द्रमाको परिक्रमा गर्दै छ । यसले कम्तीमा एक वर्षसम्म आठ पेलोडको सहयोगमा चन्द्रमाको वातावरण र सतहबारे जानकारी सम्प्रेषण गरिरहने छ । अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूले पनि विक्रमको ल्यान्डिङ पुष्टि नभए पनि यसलाई भारतीय मिसनको ठुलो उपलब्धि मानेका छन् । इसरोले आगामी १० वर्षमा छवटा मिसन चन्द्रमामा पठाउने प्रण गरेको छ ।
यसले भारतलाई अन्तरिक्ष क्षेत्रमा स्थापित गर्दै त्यस क्षेत्रमा भारतीयको लगानी र ग्लोबल स्पेस इन्डस्ट्रीमा भारतको सहभागिता प्रवर्द्धन हुने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । युरोपियन स्पेस एजेन्सीका रोसेटा मिसनका सदस्य डा. चैतन्य गिरीका अनुसार इसरोको उपलब्धिले भारतका ठुला उद्योगपतिहरूको ध्यान अन्तरिक्षतिर तानेको छ । धेरै वर्षसम्म एलएन्डटी, गोदरेज एरोस्पेसजस्ता नाम चलेका उद्योहरूले इसरोसँग काम गर्थे । अब नयाँ उद्योगहरू पनि यसमा रूचि बढाउँदै छन् ।
चन्द्रयान-२ को सफलतापछि मानिसहरूको यसप्रतिको जिज्ञास अरू बढ्ने देखिन्छ । इसरो उपग्रह केन्द्रका निर्देशक डा. पिएस गोयल भन्छन्, ‘इसरो मिसनका लागि ८० प्रतिशत हार्डवेयर उद्योगरूमै बनाइन्छ । अन्तरिक्ष कार्यक्रम बढ्दा उद्योहरूकै सहभागितामा वृद्धि हुन जान्छ ।
डा. चैतन्य भन्छन्, ‘भारतमा उपग्रहको उत्पादन आगामी समयमा ठुलो परिमाणमा हुने देखिन्छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दै छ । जब निजी क्षेत्रले सरकार, वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरू आफ्नो साथ रहेको अनुभव गरेर अन्तरिक्ष सम्बन्धी नीति उनीहरूको अनुकूल भएको पाउँछन् तब उनीहरूले यसतर्फ लगानी बढाउँछन् । भारतमा यही हुँदै छ । यसो हुँदा निजी उद्योगहरूले इसरोको मिसनमा सहभागी भएपछि उनीहरूले आफ्नै अन्तरिक्ष कार्यक्रम सुरू गर्ने छन् । यसले भारतमा पनि अन्तरिक्ष क्षेत्रमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । यसो भएमा स्वतः यस क्षेत्रमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।
दोस्रो वा तेस्रो प्रयासमा जब यान गन्तव्यमा पुग्छ अनि नमुन फिर्ता गर्ने अभियान पनि चल्न सक्छ । यसमा रोबोटको सहयोगमा चन्द्रमाको माटो, ढुंगा पृथ्वीमा ल्याइन्छ । भविष्यमा विक्रम ल्यान्डरको सफल ल्यान्डिङ पुष्टि भएमा चन्द्रयान-३ पछि चन्द्रमाको सतहका सामग्री यहाँ ल्याएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
चैतन्य गिरी थप्छन्, ‘विगत २० वर्ष हेर्ने हो भने वैज्ञानिकको अभावले चन्द्रयान-१ ले बढी समय लगायो । उनीहरूले पाँच वर्ष मंगलयानमा र पुनः चन्द्रयान-२ मा लागे । त्यसैले वैज्ञानिहरूको संख्या बढाउनु आवश्यक छ । अबका छुट्टाछुट्टै मिसनमा छुट्टाछुट्टै वैज्ञानिक समूहले काम गर्नुपर्छ ।’ यसपछि एउटा मिसनको सफलतापछि अर्को मिसन सुरू हुन्छ । भविष्यमा भारतको अभियान चन्द्रमामा मानिसलाई पठाउने तहमा पुग्न सक्छ । यसमा धेरै वैज्ञानिकको सहभागिता हुन्छ । यसको अर्थ भारतले यससम्बन्धी कार्यक्रम बढाउँदा यस्ता उद्योगको वृद्धि भई भिन्न प्रकारले रोजगारी बढ्ने विश्लेषण वैज्ञानिकहरूले गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लाे - डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको मूल्य घट्यो
अघिल्लाे - विपन्न बिरामीको उपचारमा १ करोड ९० लाख सहयोग